Iitattoos zomkhosi: ezona mbono kunye neentsingiselo | abazobe mvambo
Nat Cherry | | Iindidi zeetattoos
Iitattoos zomkhosi zezo ziphefumlelwe yimibutho yomkhosi eyahlukeneyo, kunye nezixhobo ezahlukeneyo zomkhosi, ukufezekisa uyilo oluthi, ngokucacileyo, aluyi kuba luhle ncam. Inyaniso, amaqabane aqhelekileyo alolu hlobo lwe tattoo zizixhobo, i-skulls okanye izithuthi ezifana ne-submarines okanye iindiza.
Nokuba siyintoni na isizathu sokuba utsaleleke kwiitattoos zasemkhosini, kweli nqaku siza kukunika izimvo ezininzi. yahlukile ukwenza tattoo yakho yodwa. Kwaye, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngesi sihloko kodwa ngokwembono yembali, sicebisa ukuba ufunde eli nqaku Itattoos zamajoni, isiko leenkulungwane zakudala.
1 Iingcamango zeyona tattoos yomkhosi engcono
1.1 imibutho yomkhosi
1.1.1 umkhosi womhlaba
1.1.2 imikhosi yomoya
1.2 izixhobo zomkhosi
1.2.1 Iiflegi kunye neempawu
1.2.2 I zixhobo
1.2.3 Iibheji zokuzazisa
1.4 imiboniso yemfazwe
1.5 Amabinzana anxulumene nemfazwe
2 Iifoto ze tattoos zomkhosi
Iingcamango zeyona tattoos yomkhosi engcono
Ngokuqinisekileyo wonke umntu ukhetha uxolo kunemfazweNangona kunjalo, zininzi, izizathu ezininzi ezinokubangela ukuba umntu afumane umvambo onjalo, abe ngowomntu (njengokukhumbula umntu omthandayo okanye ibutho lemfazwe) kwizinto ezibonakala zingenamsebenzi (njengokudlala iimuvi zemfazwe) . Ngayo nayiphi na imeko, apha uya kufumana imibono yazo zonke izinto ezithandayo:
Kusenokwenzeka ukuba, njengoko iitattoos bezisoloko zililizwe labaqhubi beenqanawa, ziye zaguquka zada zafikelela kwinqanaba lokuba. umkhosi ngamnye umvambo, iinkolelo kunye nenkuthazo.
Umkhosi welizwe, njengoko igama lawo libonisa, ngulowo usebenza emhlabeni. Ngokuqhelekileyo ilona gunya likhulu emkhosini kunye inokunika imibono emihle ye tattoo, umzekelo, ukusuka kwinombolo ye-battalion yeqabane eliwileyo, elinye ibinzana elimangalisayo okanye ulungelelwaniso lwendawo awayemi kuyo.
Kwezi tattoos kuyinto eqhelekileyo ukubonisa isikhundla kunye nefayile yamajoni okanye ukugxila kwiyunifomu yabo, kunye nokusebenzisa i-shades emnyama okanye emhlophe ukunika idrama ngakumbi. Isimbo sokwenene sikwahambelana kakhulu nomxholo.
imikhosi yomoya Banokunika i-tattoos enemibala emininzi, kungekhona nokuba ngumbulelo kwindlela yokuthutha yolu hlobo lomkhosi, iinqwelomoya.. Isitayile semveli, esinemibala eqaqambileyo kunye nemigca engqindilili, sinokubonakala simangalisa. Ezinye iimbono eziqhelekileyo ziquka ukugxila kwelinye lamanye amacandelo enqwelomoya (njengeepropeli, amaphiko…) okanye irejiment obumiswe kuyo, njengeparatroopers.
Iitattoos zasemkhosini eziphefumlelwe nguNavy zezona zixhaphakileyo, enyanisweni, kwaye mhlawumbi ngenxa yokuba zihlobene ngokusondeleyo noomatiloshe., ababengabokuqala ukungenisa ubugcisa be tattoo ukusuka kwiziqithi ezikude, kukho ezininzi ii-subtypes zokufumana ukuphefumlelwa, njengoko siza kubona ngezantsi.
Enye yezona ndlela zipholileyo zothutho kule nxalenye yomkhosi ziinkwili. Isitayile semveli, njengoko besitshilo kwimeko yeetattoos zomkhosi womoya, zibafanela kakhulu, ngakumbi ukuba ukhetha ukuyenza ibonakale njengokrebe. Ungayilungisa ngeenkcukacha ezifana nenombolo yerejimeni yakho.
Ulwandle lugcwele iinkolelo, ngoko ke iitattoos zeNavy azinjalo. Ezinye zezona nkolelo zidumileyo ziquka, ngokomzekelo, inkolelo yokuba umvambo onehagu nomqhagi wawuthintela ukurhaxwa, ekubeni ezi zilwanyana zaziphakathi kwezinto ezimbalwa ezasindayo ekwaphukelweni kweenqanawa (ukuba zivalelwe kwiindlwana zomthi ezazidada xa inqanawa izinzile).
Kwakhona inxulumene ngokusondeleyo noMkhosi waManzi, ezinye iitattoos zisebenza ukuphawula ukuba kukho into ekhethekileyo eyenziwe, njengohambo lokujikeleza ihlabathi, ukujikeleza iCape Horn okanye ukuhamba ngesikhephe uthotho lweemayile zolwandle.
Ukongeza kwibutho lomkhosi, izixhobo ezisetyenziswa emfazweni zikwayimpembelelo ephindaphindiweyo kwabo bafuna ukufumana tattoo yolu hlobo.
Iiflegi kunye neempawu
Iflegi inokumela ilizwe olikhuselayo ukuba usemkhosini, kwaye yenye yeendlela ezidumileyo zolu hlobo lwe tattoo, nangona kukho ezinye iindlela ezininzi zokuyimela. Ngokomzekelo, ukhozi ngokukhawuleza ludlulisela ingcamango ye-United States.
Amajoni awanazo ii-staplers okanye iipensile, kodwa ubomi bawo bemihla ngemihla busekelwe kwezinye izixhobo eziyingozi ngakumbi. Phakathi kwezixhobo ezikhethiweyo zokungafi kwi tattoo sifumana imipu engaphantsi komatshini kunye neebhombu. Ukuba ufuna ukugxininisa ukuba zihlobene njani nokufa, ungazidibanisa kunye ne-skulls, nangona kuqhelekile ukwenza njalo nge roses, imihla ...
Iithegi zezinja zingenye yeendlela zokuchonga ijoni, yiyo loo nto njenge tattoo zixhaphake kakhulu kwaye kwangoko bazisa umbono ocacileyo wokuba ngubani onxibe olo yilo kulusu lwabo. Ngokungafaniyo nolunye uyilo, kuxhaphake kakhulu ukuzifumana kwisitayile sokwenyani, zidwetshwe kwiindawo ezinjengentamo okanye isifuba.
Imizobo yenye yezona ndlela zobuqu esinokumkhumbula ngazo umntu othile.ngakumbi ukuba uthembele kwifoto endala. Banokuba nombala okanye abamnyama nabamhlophe, kwaye babonakala behle kakhulu kwisitayela esinokwenyani, nangona kuya kufuneka ufumane umzobi we tattoo onamava amaninzi kule ndlela yokwenza ukuba idizayini ibonakale ipholile.
Olunye ukhuthazo olukhulu lwee tattoos zasemkhosini ziindawo zemfazwe, nokuba ziphefumlelwe yintsomi (idla ngokusuka kwiifilimu zodidi oludumileyo ezifana ne apocalypse ngoku o Ibhulorho kuMlambo iKwai) okanye ngokwenyani. Njengoko sele sikhankanyile kwimeko ye-portraits, kuba ziyi-tattoos ezihlala zikhetha isitayile sokwenyani, kuya kufuneka ukhangele umzobi ochwepheshile we tattoo kwesi simbo.
Amabinzana anxulumene nemfazwe
Ekugqibeleni, sigqiba ngengcamango elula kodwa enamandla ngokulinganayo, ibinzana elinxulumene nemfazwe. Kukho intabalala esekwe kumagama ezilumko ezidumileyo kunye neengqondi onokuthi uzinxibe wedwa okanye ngenye into. Ukongeza, umxholo wamabinzana unokugqitha ngaphaya kokumelwa kwemifanekiso kwaye uthethe ngoxolo.
Iitattoo zasemkhosini zidla ngokuba ngumphumo wekratshi okanye intlungu yokufelwa ngumntu omthandayo ngoxa wayesemkhosini okanye emfazweni. Nangona singabalandeli boxolo ngakumbi, singathanda ukwazi ukuba ukhe wakhetha ukwenza tattoo yesitayile okanye ufuna ukuyifumana.
Iifoto ze tattoos zomkhosi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zomkhosi: ezona mbono zibalaseleyo kunye neentsingiselo
Iitattoos zeCamaron, zabalandeli bemvumi edumileyo yeflamenco